Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်: 41% - 50% Cert: ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု(24 များအတွက်စုစုပေါင်း အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု ထုတ်ကုန်များ)
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
လူမီနီယမ် Die ကာစ်
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Mr. sheldon
အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု , အမြင့် soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု , စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ၏ OEM ထုတ်လုပ်မှု
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည် ထိုကဲ့သို့သောဘောင်အဖွဲ့ဝင်များ, ဝက်ဝံ, axles, splines, စွဲစေ, ဖျံနှင့်စက်ဆီချောဆီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို။ စက် Eleme nts...
tag ကို: Precision Injection ကိုမှိုဆက်စပ်ပစ္စည်း , ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု , အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ပလပ်စတစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဒီထုတ်ကုန်ဟာရှင်းလင်းသူများ shell ကို, တိကျဆေးထိုးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှု, ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဘို့ဆေးထိုးတန်ဆာစက် 350 တန်ချိန်သုံးပြီးစီးပွားဖြစ်စားသုံးသူထုတ်ကုန်,...
tag ကို: မော်တော်ကားအလင်းသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ , မော်တော်ကားသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ , မော်တော်ကားသတ္တုဗဟို Console
tag ကို: ထိပ်တန်း Die ကာစ် , မဂ္ဂနီစီယမ် Process ကို Casting Die , မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ်သတ္တုစပ်များကို Applications ကို
tag ကို: မြင့်မားသောဖိအားပစ္စည်း Casting Die , ဖိအားမှို Casting Die , မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting semi-အစိုင်အခဲသေ
tag ကို: ဖိအားကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die , ဖိအားလုပ်ငန်းစဉ်န့်သတ်ချက်များ Casting Die , ဖိအားအမျိုးအစားများ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုအဖြစ်သာစက်မှုဇုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း tableware အဖြစ်, အိမ်မှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအသကျရှငျအတှကျသငျ့လျြောသော။...
tag ကို: ဖိအားသေ Cast , သံမဏိသေကာစ် , Components ကုန်ပစ္စည်းများသို့ကာစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များသည်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကူညီဖိအားသေ Cast ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်နျဆာပဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား Cast ကျွန်တော်တို့ရဲ့ State-Of-The-Art...
tag ကို: Cast ကိုမှို Die , custom သေကာစ် , လူမီနီယမ် Co. , Casting Die
tag ကို: အင်ဂျင်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ , မော်တော်ယာဉ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ , အလင်းကို & အလတ်စားစက်
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များနှင့်နည်းပညာများ , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Properties ကို , အမြဲတမ်းမှိုလူမီနီယမ်ကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်
semi-အစိုင်အခဲသတ္တုများပုံသွန်းပုံမှန်အားဖြင့် High-end Cast များအတွက်အသုံးပြုသည်။ လူမီနီယံသတ္တုစပ်အဘို့, ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်တောင်ပေါ်, လေထူးထူးအပြားပြားအာရုံခံကိရိယာထဲကနေအလားတူ, အင်ဂျင်လုပ်ကွက်များနှင့်ရေနံစုပ်စက် filter...
tag ကို: ဖိအားစီးပွားရေး Casting Die , တစ်ဦးကအမြဲတမ်းမှိုကာစ်လုပ်ငန်းစဉ် , အမြဲတမ်းမှိုကာစ်ပစ္စည်း
ကထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွက်အသုံးပြုသည်အဖြစ်လူမီနီယမ်သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, ယနေ့သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အသုံးပြုအသုံးအများဆုံးအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ,...
tag ကို: ပလပ်စတစ် Electroplating ထုတ်ကုန်များ , ဖိအားမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် Casting Die , ဖိအားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
Electroplating သူတို့အနေနဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်တစ်ဦးပါးလွှာဆိုနိုင်ပါတယ်သတ္တုအပေါ်ယံပိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ကပ်သီးကပ်သတ်သတ္တုစုံလုံလျှော့ချရန်လျှပ်စစ်လက်ရှိအသုံးပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Electroplating အဓိကအား...
tag ကို: Cast ကိုစက်များ Die , semi-အစိုင်အခဲကာစ်လူမီနီယမ် , semi-အစိုင်အခဲကာစ်တင်လျှောက်လွှာ
(စနှိပ်အဖြစ်လူသိများ) နေမှုကိုချေဖျက်ဘယ်မှာ tool ကိုတစ်ဦးနေမှုကိုချေဖျက်စာနယ်ဇင်းသို့အလွတ်သို့မဟုတ်ကွိုင်ဖြစ်စေ form မှာပြားချပ်ချပ်စာရွက်သတ္တုအားမရ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပိုက်ကွန်ပုံသဏ္ဍာန်သို့မျက်နှာပြင်ပုံစံများသတ္တုသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ သတ္တု,...
tag ကို: OEM မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် Die , မဂ္ဂနီစီယမ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die , သတ္တုကာစ်အစိတ်အပိုင်းများ
မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ components မော်တော်ကား, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကရိယာများနှင့်လက် tools တွေကိုဥပမာ, များစွာသောဒေသများရှိအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အတွက်ပြည့်စုံထောက်ခံမှုသင့်လျော်သောပစ္စည်းကိရိယာများ,...
tag ကို: CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ , စိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ , မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
တိုင်း CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သံသရာအတွက်နေရာမှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေနဲ့မတူပဲ, CNC...
tag ကို: စက်များအတွက်အပိုင်း Casting Die , စိတ်ကြိုက် Precision Casting အစိတ်အပိုင်းများ Die , မြင့်မားသော Precision မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ
ပေါ့ပါးတဲ့သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာပစ္စည်းအမျှမြင့်မားသော Precision မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဇင့်၏လူမီနီယံ၏ 2/3 ညီမျှဖြစ်သော l.74gcm တစ်သိပ်သည်းဆ, သံမဏိ 1/4 နှင့်ဌ /4ရှိပါတယ်။...
tag ကို: Die တိုက်ရိုက်ကာစ်တ် , Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများ Die , မဟာမိတ်သေကာစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသေ Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်ကပ်။ ဒီထုတ်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ,...
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Precise ထုတ်ကုန်များ , semi Solid ကာစ်တင်စက်များ , semi Solid ကာစ်တင်လျှောက်လွှာ
အဆိုပါ semisolid အလွယ်တကူဘုံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော dendrite ကွန်ယက်ကိုအရိုးစုကွဲပြား granular တစ်ရှူးပုံစံဖွဲ့စည်းဖို့လည်းကျိုးကြောင်းဒါကြောင့်တိကျမျက်စိဘောင်, semisolid သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, ချ. , အရှင်အောင်, အရည်သတ္တုများ၏...
tag ကို: လူမီနီယမ် Casting Die , စက်မှုသေကာစ် , သေကာစ်၏ဖြစ်စဉ်ကို
စက်မှုသေကာစ်တိကျတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖို့သတ္တုများပုံသွန်းစိတ်ကြိုက်လွယ်ကူအောင်, ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံများကို၏ဆည်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယံ Casting န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာများ,...
tag ကို: အမြဲတမ်းမှိုကာစ်သံမဏိ , ထောက်ပံ့ကုန် Casting Die , Precision အစိတ်အပိုင်းများနေမှုကိုချေဖျက်
ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားတောင်းဆိုချက်များကိုတက်ကိုက်ညီဖို့ကျနော်တို့ Precision တံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။...
tag ကို: လူမီနီယမ်ဖိအား Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများ Die , ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဖိအားအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die , စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိအားသတ္တုများပုံသွန်းဖြေရှင်းချက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်များကို high-performance ကိုလူမီနီယံသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုင်တွယ်ရန်ညှိကြောင်းစနစ်, deburring, တူးဖော်ခြင်း, Threading, polishing...
tag ကို: custom မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် , မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကိုစက်မှု Properties ကို , ကုန်ကျစရိတ် Casting Die
မဂ္ဂနီဆီယမ်သေ Cast ၏အားသာချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: ခြွင်းချက်ပါးလွှာသောမြို့ရိုးစွမ်းရည်, ကောင်းမွန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချေးခုခံ, ကောင်းမွန်သောပြီးဝိသေသလက္ခဏာများ, အပြည့်အဝ Recycle ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကိုစက်မှု Properties...
tag ကို: လူမီနီယမ်သတ္တုစပ်သို့ကာစ် Die , မြင့်မားသောဖိအားဒီဇိုင်း Casting Die , လူမီနီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း
tag ကို: လူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ်တင်ကွယ်လွန် , အလူမီနီမှိုအလွိုင်း , လူမီနီယမ် Die ကာစ်တင်စက်
လူမီနီယမ်အလွိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု Casting မြင့်မားသည်ကွယ်လွန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှုပ်ထွေးသော, တိကျသောအရွယ်အစား, ပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိကို ချ. သေဆုံးနိုင်, ခိုင်မာသောပိုမိုမြင့်မားသေ Cast ဖြစ်တယ်,...
Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Automotive သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများ Casting OEM အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် Semi-Solid သေ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM အမြင့် Precision အလွိုင်း Iindustrial အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM စိတ်ကြိုက် Precision ဖိအားအလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM အမြင့်ဖိအား Cast ကို Components Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM အမြင့်အိမ်ခြံမြေစက်မှု Components Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM စိတ်တိုင်းကျအလွိုင်းသံမဏိ Precision အပိုင်း Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Precision စက်အစိတ်အပိုင်းများမဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျဝန်ဆောင်မှုပုံသွင်းထား Precision လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Precision ပလတ်စတစ် Electroplating ထုတ်လုပ်မှုစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Precision အဝါရောင်သို့ပြန်သွားရန်ဖုံးမူရင်း Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစိတ်အပိုင်းများ Casting high Precision စက်ပစ္စည်း Semi-Solid သေ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Precision အစိတ်အပိုင်းများစိတ်ကြိုက် Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက် Precision Semi Solid သေကာစ်စက်ရုံ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Precision ရောင်းချ semi Casting မျက်မှန် Frame က Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန် Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန်များအတွက် OEM Precision သတ္တုတံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံစိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision Semi-Solid သေကာစ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM CNC စက်ပစ္စည်းအမြင့် Precision ခုံအစိတ်အပိုင်းများ Turn အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Precision လူမီနီယမ်အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု from China, Need to find cheap အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our အမြင့် Soft Precision အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု, We'll reply you in fastest.
Last month, the Italian Plastics and Rubber Industry Exhibition 2018 was successfully concluded at the New International Exhibition Center in Milan, Italy. During the exhibition, 72 enterprises and...
According The Verge report, scientists in the United States have brought inanew material of aluminum alloy that is not too fragile as regular aluminum alloys, but that has been modified to match...
OEM မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Frame ကဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM စိတ်ကြိုက် DieCasting Laptop ကိုများအတွက်ထိပ်တန်းအခြေစိုက် Frame အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစိတ်အပိုင်းများ Percision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Laptop ကိုများအတွက် Die နှမြော အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: semi Solid သေကာစ် , မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , CNC စက်ပစ္စည်း , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း , အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်းသူ , injection တန်ဆာ , ကာစ် Die , semi-Solid ကာစ် , ထုတ်ယူခြင်း Casting